T shirt, Polo uwe elu, Hoodie, Sweatshirt - LOTTE
site na echiche ruo na nsonaazụ ikpeazụ
Akowa Of Project
Mgbe enwetara ajụjụ ndị ahịa, ndị ahịa anyị ga-akpọtụrụ ha n'ime elekere 1 iji kwado nkọwa niile ma nye ha aro kwesịrị ekwesị
Nzube na mmepe nke ngwaahịa
Anyị imewe otu ka mock-acha ọkụ dị ka gị arịrịọ na-ezitere gị ikpeazụ artwork gị ihu ọma. A imewe na mgbe akwadoro ya ka ezigara ya na mmeputa.
Nabata ihe eji emeputa ihe tupu egosiputa ya na nkowa nke akwukwo oru akwadoro, ya na akwa na agba di ya, ya na LAB DIPS nke agba ka akwado ya.
Mass Production & Ugboro abụọ Quality Control
Mgbe mmepụta ihe na-amalite, ndị ọrụ nyocha anyị na-ahụ maka usoro mmepụta niile iji debe ngwaahịa ndị gwụchara nke ga-abụ otu ihe ahụ ka ihe eji eme ihe.
Chain nwere ike ịdabere na ya
Dị ka a 20-afọ ahụmahụ emeputa, anyị nwere ekesịpde a ọkọnọ yinye, si akụrụngwa dị iche iche ngwa, dị ka yarn, obibi, embroidery, labeelu, hangtag, wdg Anyị na-ahọrọ ndị kasị kwesịrị ekwesị akụrụngwa na technology dabere na ụdị nke uwe ma obu akwa nke imeputa.
Ike, Nhazi na Production
N'agbanyeghị uwe a ga-azụlite ma ọ bụ mmezi chọrọ. Anyị nwere otu na ahụmịhe dị mkpa iji mepụta ụdị ọrụ niile. Anyị nwere 3 isi mmepụta akara maka t uwe elu, polo uwe elu, hoody & jaket. Ihe dị ka 300,000 iberibe kwa ọnwa.
Inye aka na ogo
Anyị na-anọgide na-enwe nkwa mgbe niile na ịdị mma site na nyocha abụọ na uwe tupu ịnyefee ndị ahịa.
Kedu ihe OEM / ODM pụtara na uwe ma ...
Ihe na-ekpo ọkụ n'oge oyi na Lotte Garm ...
Jiangxi Lotte uwe Co., Ltd.
E hiwere ụlọ ọrụ Jiangxi LOTTE Garment na 1997, ọ dị na Nanchang, Jiangxi, nke bụ isi obodo uwe ndị China. LOTTE Uwe bụ ọkachamara emeputa uwe na-enye OEM & ODM ọrụ, si Buy yarn, kpara akwa, ịcha, ịkwa akwa ka okokụre ngwaahịa, na nyere uwe customization, uwe nhazi na nkewa ọrụ.
Factorylọ ọrụ ahụ nwere ahịrị mmepụta anọ, nke mbụ bụ T Shirt / bọọlụ jersey / tank top, nke abụọ bụ maka uwe elu, nke atọ bụ maka jaket / sweatshirts / hoody / ogologo ọkpa, nke ọzọ bụ maka ihi ụra / uwe ura abali. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ uwe niile ejiri aka mee.